“Young Leaders Development Program” (Batch -2) FREE Training by WISE College | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
“Young Leaders Development Program” (Batch -2) FREE Training by WISE College
Posted on April 8, 2017 by MYEO in Local, scholarship, Training, youth opportunities //0Comments
Deadline : 27 April,2017
Location : WISE College, Yangon
Starting Date — 9/5/2017
Date – Tue, Wed & Thur
“Young Leaders Development” သင်တန်းသည် “Better Education,Better Future for Our Society” Campaign ၏ ဒုတိယအကြိမ်ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုထားသူ အထက်တန်းကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။ လူငယ်များတွေးခေါ်မှုမြှင့်တက်လာစေရန်နှင့် ဦးစီးဦးဆောင်မှုပြုလုပ်တတ်လာစေရန် သင်ကြားပြသပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ တွေးခေါ်မှုကိုမြတ်နိုးသော၊ ရည်မှန်းချက်ကြီးသော၊ အောင်မြင်လိုစိတ်ပြင်းပြသော လူငယ်များအတွက် သီးသန့်အခမဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
(3) Team Building and Motivation
(5) Management Ethics တို့ဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင် Batch (2) တက်ရောက်ခွင့်ရသော လူငယ်များအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားအပြောအဆိုမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်၍ “English for Youth” Course ကိုပါသင်ကြားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။သင်တန်းကာလမှာ တစ်လခွဲကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလတစ်လျှောက် Role Playing များ၊ Case Study လေ့လာမှုများလည်းပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားပါက WISE College မှ Certificate များပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။သင်ကြားပေးမည့်ဆရာမှာ…
President & Co-Founder of WISE College
မှ အဓိကသင်ကြားပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလောက၌ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ခေါင်းဆောင်များ၊ အောင်မြင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးဟောပြောမည့် အစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
“Young Leaders Development” သင်တန်းသည် လူဦးရေအကန့်အသတ်ဖြင့်သာ လက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။တွေးခေါ်မှုကိုမြတ်နိုးသော၊ ရည်မှန်းချက်ကြီးသော၊ အောင်မြင်လိုစိတ်ပြင်းပြသော လူငယ်များကိုသာ ဦးစားပေးစီစစ်လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် WISE College မှမေးမြန်းထားသော အောက်ပါမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုကာ Assignment တင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
(၁) Price (ဈေးနှုန်း) နှင့် Value (တန်ဖိုး) ခြားနားချက် ?
(၂) စိတ်ဓာတ်၊လုပ်ရပ်၊ရလဒ် တို့တွင်ဘယ်ဟာအရေးကြီးပါသလဲ?
(မှတ်ချက်။ ။ ရွေးချယ်ထားသောတစ်ခုကိုသာ အသေးစိတ်ဖြေဆိုရန်။)
(၃) ပညာသင်ယူရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်း?
• A4 စာရွက်ဖြင့်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မေးခွန်းတစ်ခုကို A4 တစ်မျက်နှာအပြည့် ဖြေဆိုပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
• ဖြေဆိုသူအမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်နှင့် လက်ရှိနေထိုင်သောနေရပ်လိပ်စာ တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရပါမည်။ (သီးသန့် A4 တစ်ရွက်ဖြင့်) အထက်ပါမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုကာ April ၂၅ရက်၊ ၂၆ရက်နှင့် ၂၇ရက်များအတွင်း WISE College ရွှေဂုံတိုင် Campus သို့ Assignment လာရောက်တင်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို Assignment
တင်ထားသော ကျောင်းသား/သူများထဲမှရွေးချယ်ခံရသူများသာ “Young Leaders Development” Training ကိုတက်ရောက်ခွင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
100 % free for course fees
သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးပါက WISE College မှ ချီးမြှင့်မည့် Certificate ကိုရရှိပါမည်။
WISE College ShweGoneDine Campus:
Room (1009 A/B)၊ ၁၀လွှာ၊ ယုဇနတာဝါ၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်းနံပါတ် ၀၁ ၅၅၆၁၈၃၊ ၀၉ – ၂၅၅၇၂၃၃၈၈၊ ၀၉ – ၄၂၁၁၅၄၈၆၂ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။